Okisijeni yekuzadza sensor yeApple Tarisa | Ndinobva mac
Okisijeni yekuzadza sensor yeApple Watch
MuApple ivo vanga vachivandudza mashandiro ayo smartwatch wachi kubva payakaiswa pamusika. Mawachi matsva akaunzwa kubva kwekupedzisira 2015 kusvika nhasi, vakagara vachiwedzera kuvandudza mune zvehutano zvinhu uye izvi zvinoita kunge zvicharamba zviri izvo muchizvarwa chinotevera chewatch.
Zvinoenderana nesvikiro 9to5Mac, Apple ichave yakagadzirira kuvhura nyowani basa pane yayo smartwatch, mune ino kesi iyo kuona ropa okisijeni. Iri ibasa ratakanyeperwa kwenguva yakati kuti rinogona kusvika kune yakasimba femu uye zvinoita sezviri pachena kuti iyo nyowani vhezheni yewatch kana kunyangwe kuburikidza nesoftware yekuvandudza ichaonekwa munguva pfupi iri kutevera.
Isu hatinyatso kuziva kana chimiro ichi chichigona kuvhurwa neshanduro nyowani yeWOSOS, asi ndinovimba hongu, sezvazvakaitika nekuitwa kwe "Noise" kuonekwa kubva kuApple Watch kutinyevera kana takatarisana neruzha rukuru kwenguva refu. Zvese zvinoratidza kuti iro oxygen oxygen saturation muverengi ichave sensor nyowani, isu tichaona zvinozoitika pakupedzisira.
Muna 9to5Mac vanonongedzerawo pakuvandudzwa kwebasa remagetsi erudzi ratinoshanda kubva muChikamu 4 kusvika Chitsauko 5. Iri basa rinoratidzika kunge rakaganhurirwa kana kurova kwemoyo kuri pamusoro pe120ppm chimwe chinhu chinogona kuvandudzwa zvakapusa nesoftware kudzokorora mune inotevera vhezheni yeWOSOS. Zvinyorwa zvitsva zvinotarisirwa kune inotevera Apple Watch modhi uye isu tinotarisirawo kuti Series 4 uye Series 5 ichawedzera zvimwe zvakawanda zvitsva sezvinobvira nekuvandudza software, isu tichaona uko vashandisi veaya mawachi vakasiyiwa kunze painotangwa. mune itsva system inoshanda uye new wachi gore rino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Okisijeni yekuzadza sensor yeApple Watch
Mutsva Powerbeats4 Mifananidzo Yakabvaruka
Apple inokudza chizvarwa chinotevera chevakadzi vatungamiriri